နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအသည်းစွဲ “I’m NotaRobot” မင်းသားချော Yoo Seung Ho အကြောင်းတစေ့တစောင်း – Trend.com.mm
အခုလတ်တလော နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေသဘောကျနှစ်သက်နေတဲ့”I’m NotaRobot” မင်းသားချော Yoo Seung Ho အကြောင်းလေး နည်းနည်းပြောပြမယ်ဆိုရင်စိတ်မဆိုးလောက်ဘူး မဟုတ်လား 😛 မင်းသားချောနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ
အကြောင်းအရာလေးတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် မင်းသားချော Yoo Seung Ho အကြောင်းလေးကို ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
၁) ၆နှစ်သားအရွယ်တည်းက အနုပညာလောကထဲရောက်ခဲ့သူ
မင်းသားချော Yoo Seung Ho ရဲ့ အမေဟာ ကြော်ငြာအေဂျင်စီတစ်ခုကို သားဖြစ်သူရဲ့  ဓာတ်ပုံပို့ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။အဲ့ဒီကြော်ငြာအေဂျင်စီဟာလည်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မော်ဒယ်မဟုတ်တဲ့ မျက်နှာသစ်မော်ဒယ်ရှာဖွေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဓာတ်ပုံကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ သဘောကျသွားခဲ့ပြီး ဆဲလ်ဖုန်းကြော်ငြာရိုက်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကတည်းက
ကလေးသရုပ်ဆောင်အဖြစ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာပါဝင်လာခဲ့တာပါ။သူ့ကို Nation’s Little Brothers တစ်ယောက်အဖြစ်လည်း ကလေးဘ၀တုန်းကလူသိများခဲ့ပါတယ်။Nation’s Little Brothers ဆိုတာ အသက် ၂၀အောက်အရွယ်မှာအနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်တွေကို သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
၂)သူ့ရဲ့ နာမည်ပြောင်က So Ji Sub အငယ်စားလေးပါတဲ့
ငယ်ငယ်တုန်းက သူ့ရဲ့မျက်နှာဟာ မင်းသားချော So Ji Sub နဲ့ဆင်တူတာကြောင့် Yoo Seung Ho ကို So Ji Sub အငယ်စားလေးလို့ခေါ်ကြတာပါ။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာ ၂၀၀၈ခုနှစ်တုန်း ကရိုက်ကွင်းတစ်ခုမှာပထမဆုံးဆုံတွေ့ဖူးတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအံ့အားသင့်ခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။‘Dimchae’ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ကူးပြီးနောက်မှာ နှစ်ယောက်သားပိုပြီး ရင်းနှီးသွားခဲ့ ကြပါတယ်။၂၀၁၃ မှာ So Ji-sub ရဲ့ 6pm.. Ground music video မှာ Park Shin Hye နဲ့အတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။So Ji Sub က သူ့ကို အိန်ဂျယ်လ်လို့တောင် ချစ်စနိုးပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။သွေးရင်းမဟုတ်ပေမဲ့ညီအစ်ကိုချစ်ခင်ကြတဲ့သူတွေပါ။
၃)ပထမဆုံးအဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တာက Flames of Desire ဇာတ်ကားမှာပါ
အဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုမျိုးရိုးကဆင်းသက်လာသူအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။နာမည်ကျော်မင်းသမီး Su Bin ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုကြောင့်လည်းသူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေက ပိုပြီး ပီပြင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
နောက်ပိုင်းတက်သစ်စမင်းသားတွေထဲမှာ Yoo Seung Ho ဟာ နန်းတွင်းဇာတ်ကားတွေပိုပြီး အရိုက်များခဲ့ပါတယ်။The Magician and Seondal: The Man Who Sells the River
၊Ruler: Master of the Mask ၊ Arang and the Magistrate ၊The Magician ၊ Warrior Baek Dong-soo စတဲ့နန်းတွင်းဇာတ်ကားတွေနဲ့ စပြီးနာမည်ကျော်ကြားခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာလည်း မင်းသမီးချောGo Ara ၊ Kim So Hyun ၊ မင်းသား Ko Chang Seok ၊ Cho Jae Hyun ၊Lee Joon-gi ၊ Ji Chang-wook တို့နဲ့တွဲဖက်ပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့မသွားခင်တုန်းက ဓာတ်ပုံဆရာ Bori ရိုက်ကူးပေးထားတဲ့ Travel Letter ၊ Spring Snow စတဲ့ ဓာတ်ပုံစာအုပ်လေးတွေထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်မှာ ဂျပန်ပြည်မှာပျော်ရွှင် ကြည်နူးနေတဲ့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်ပရိသတ်တွေအလွမ်းပြေကြည့်နိုင်တဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း ဂျယ်ဂျူကျွန်းကိုခရီးထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့။
၆)နောက်ဆုံးရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲက I’m NotaRobot ပါ
I’m NotaRobot ဟာ လူသားနဲ့စက်ရုပ်ကြားက အလွဲလေးတွေနဲ့ချစ်ခြင်းတရား ကိုပုံဖော်ထားတဲ့ အချစ်ဟာသဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သလိုဒီလိုထူးထူးခြားခြား ဇာတ်ရုပ်မှာပါဝင်ခဲ့ဖူးတာ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက ပထမဆုံးပါပဲ။ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ ရင့်ကျက်နေပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသား Yoo Seung Ho ရဲ့ ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခံစားချက်နဲ့သရုပ်ဆောင်ပုံတွေက အသက်ဝင်လွန်းလို့ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ တခဲနက်အားပေးမှုကို ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အခိုင်အမာရရှိခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Yoo Seung Ho ရဲ့ မွေးနေ့ကတော့ ၁၉၉၃ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ ၁၇ရက်ပါ။အခုဆိုရင်တော့ အသက် ၂၄နှစ်ရှိပါပြီ။အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ချစ်စရာမျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသလို တည်ကြည်ချောမောတဲ့ ပုံရိပ်တွေလည်းရှိတဲ့မင်းသားရဲ့ ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက် ပါတယ်နော်။
အခုလတျတလော နှုတျခမျးနီမလေးတှသေဘောကနြှဈသကျနတေဲ့”I’m NotaRobot” မငျးသားခြော Yoo Seung Ho အကွောငျးလေး နညျးနညျးပွောပွမယျဆိုရငျစိတျမဆိုးလောကျဘူး မဟုတျလား 😛 မငျးသားခြောနဲ့ပတျသကျပွီး ပရိသတျတှမေသိသေးတဲ့စိတျဝငျစားဖှယျရာ
အကွောငျးအရာလေးတှရှေိနပေါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့ မငျးသားခြော Yoo Seung Ho အကွောငျးလေးကို ပွနျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
၁) ၆နှဈသားအရှယျတညျးက အနုပညာလောကထဲရောကျခဲ့သူ
မငျးသားခြော Yoo Seung Ho ရဲ့ အမဟော ကွျောငွာအဂေငျြစီတဈခုကို သားဖွဈသူရဲ့ဓာတျပုံပို့ပေးခဲ့ဖူးပါတယျ။အဲ့ဒီကွျောငွာအဂေငျြစီဟာလညျး ပရျောဖကျရှငျနယျမျောဒယျမဟုတျတဲ့ မကျြနှာသဈမျောဒယျရှာဖှနေတေဲ့အခြိနျဖွဈပါတယျ။သူ့ဓာတျပုံကိုမွငျတဲ့အခါမှာတော့ သဘောကသြှားခဲ့ပွီး ဆဲလျဖုနျးကွျောငွာရိုကျကူးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။အဲ့ဒီကတညျးက
ကလေးသရုပျဆောငျအဖွဈရုပျရှငျဇာတျလမျးတှဲတှမှောပါဝငျလာခဲ့တာပါ။သူ့ကို Nation’s Little Brothers တဈယောကျအဖွဈလညျး ကလေးဘဝတုနျးကလူသိမြားခဲ့ပါတယျ။Nation’s Little Brothers ဆိုတာ အသကျ ၂ဝအောကျအရှယျမှာအနုပညာလောကထဲဝငျရောကျလာတဲ့ ကလေးသရုပျဆောငျတှကေို သတျမှတျချေါဆိုတာဖွဈပါတယျ။
၂)သူ့ရဲ့ နာမညျပွောငျက So Ji Sub အငယျစားလေးပါတဲ့
ငယျငယျတုနျးက သူ့ရဲ့မကျြနှာဟာ မငျးသားခြော So Ji Sub နဲ့ဆငျတူတာကွောငျ့ Yoo Seung Ho ကို So Ji Sub အငယျစားလေးလို့ချေါကွတာပါ။သူတို့နှဈယောကျလုံးဟာ ၂၀၀၈ခုနှဈတုနျး ကရိုကျကှငျးတဈခုမှာပထမဆုံးဆုံတှဖေူ့းတာဖွဈပွီးသူတို့ကိုယျတိုငျလညျးအံ့အားသငျ့ခဲ့ဖူးပါတယျတဲ့။‘Dimchae’ဆိုတဲ့ ကွျောငွာရိုကျကူးပွီးနောကျမှာ နှဈယောကျသားပိုပွီး ရငျးနှီးသှားခဲ့ ကွပါတယျ။၂၀၁၃ မှာ So Ji-sub ရဲ့ 6pm.. Ground music video မှာ Park Shin Hye နဲ့အတူသရုပျဆောငျခဲ့ကွပါတယျ။So Ji Sub က သူ့ကို အိနျဂယျြလျလို့တောငျ ခဈြစနိုးပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။သှေးရငျးမဟုတျပမေဲ့ညီအဈကိုခဈြခငျကွတဲ့သူတှပေါ။
၃)ပထမဆုံးအဓိကဇာတျဆောငျအဖွဈပါဝငျခဲ့တာက Flames of Desire ဇာတျကားမှာပါ
အဲ့ဒီဇာတျကားမှာတော့ခမျြးသာတဲ့မိသားစုမြိုးရိုးကဆငျးသကျလာသူအဖွဈသရုပျဆောငျထားတာပါ။နာမညျကြျောမငျးသမီး Su Bin ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုကွောငျ့လညျးသူ့ရဲ့သရုပျဆောငျမှုတှကေ ပိုပွီး ပီပွငျခဲ့ပါတယျတဲ့။
နောကျပိုငျးတကျသဈစမငျးသားတှထေဲမှာ Yoo Seung Ho ဟာ နနျးတှငျးဇာတျကားတှပေိုပွီး အရိုကျမြားခဲ့ပါတယျ။The Magician and Seondal: The Man Who Sells the River
၊Ruler: Master of the Mask ၊ Arang and the Magistrate ၊The Magician ၊ Warrior Baek Dong-soo စတဲ့နနျးတှငျးဇာတျကားတှနေဲ့ စပွီးနာမညျကြျောကွားခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီဇာတျလမျးတှဲတှမှောလညျး မငျးသမီးခြောGo Ara ၊ Kim So Hyun ၊ မငျးသား Ko Chang Seok ၊ Cho Jae Hyun ၊Lee Joon-gi ၊ Ji Chang-wook တို့နဲ့တှဲဖကျပွီး ရိုကျကူးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
စဈမှုထမျးဆောငျဖို့မသှားခငျတုနျးက ဓာတျပုံဆရာ Bori ရိုကျကူးပေးထားတဲ့ Travel Letter ၊ Spring Snow စတဲ့ ဓာတျပုံစာအုပျလေးတှထေုတျခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီစာအုပျမှာ ဂပြနျပွညျမှာပြျောရှငျ ကွညျနူးနတေဲ့သူ့ရဲ့ပုံရိပျတှကေိုမွငျတှနေို့ငျပါတယျ။စဈမှုထမျးဆောငျနတေဲ့အခြိနျပရိသတျတှအေလှမျးပွကွေညျ့နိုငျတဲ့လကျဆောငျတဈခုလညျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။အရငျးနှီးဆုံးသူငယျခငျြးတှနေဲ့လညျး ဂယျြဂြူကြှနျးကိုခရီးထှကျခဲ့ပါသေးတယျတဲ့။
၆)နောကျဆုံးရိုကျကူးထားတဲ့ဇာတျလမျးတှဲက I’m NotaRobot ပါ
I’m NotaRobot ဟာ လူသားနဲ့စကျရုပျကွားက အလှဲလေးတှနေဲ့ခဈြခွငျးတရား ကိုပုံဖျောထားတဲ့ အခဈြဟာသဒရာမာဇာတျလမျးတှဲဖွဈသလိုဒီလိုထူးထူးခွားခွား ဇာတျရုပျမှာပါဝငျခဲ့ဖူးတာ ဒီဇာတျလမျးတှဲက ပထမဆုံးပါပဲ။ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာတော့ ရငျ့ကကျြနပွေီဖွဈတဲ့ မငျးသား Yoo Seung Ho ရဲ့ ပီပွငျတဲ့သရုပျဆောငျခကျြတှေ ကိုမွငျတှနေို့ငျပါတယျ။သူ့ရဲ့ခံစားခကျြနဲ့သရုပျဆောငျပုံတှကေ အသကျဝငျလှနျးလို့ မိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့ တခဲနကျအားပေးမှုကို ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာ အခိုငျအမာရရှိခဲ့တဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။
Yoo Seung Ho ရဲ့ မှေးနကေ့တော့ ၁၉၉၃ခုနှဈ၊သွဂုတျလ ၁ရရကျပါ။အခုဆိုရငျတော့ အသကျ ၂၄နှဈရှိပါပွီ။အပွဈကငျးစငျတဲ့ခဈြစရာမကျြနှာလေးကိုပိုငျဆိုငျထားသလို တညျကွညျခြောမောတဲ့ ပုံရိပျတှလေညျးရှိတဲ့မငျးသားရဲ့ ပုံလေးတှကေို ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျ ပါတယျနျော။